ပိုမိုကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်များဖန်တီးခြင်း - Hello Sayarwon
ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုကိုရရှိရန် အသီးအရွက် အသားငါး နို့ထွက်ပစ္စည်းစုံလင်အောင်စားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် မျှတကျန်းမာစေသောအသားပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် အောက်ပါဆောင်းပါးက ကျန်းမာသောအစားအသောက်ပုံစံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သော ၁၀ချက်ကိုပြသပေးသည်။
အသီးအရွက်များတွင် သင်ခန္ဒါကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော အဓိကအားဖြင့် အစာချေစနစ်အတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့်မင်နရယ်များစွာပါဝင်သည်။ အရောင်တောက်သောအရွက်များ ရာသီအလိုက်သောအသီးများကိုစားပါ။
၁၀၀% ကောက်စပါးပါဝင်သော သို့မဟုတ် ၁၀၀ဂျုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရာ များက ပြန်ပြုပြင်ထားသောစပါးထက်စာပင် ဖိုင်ဘာဓါတ်ပိုပါရုံမက အာဟာရပါပြည့်ဝသည်။ ထိုကြောင့် သင်အစားထဲထည့်စားပါက သင့်အစာအိမ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။
သင့်အစားအသောက်စားပြီးချိန်တွင် အဆီနည်းသော သို့မဟုတ် အဆီမပါသောနို့တစ်ခွက်ကိုသောက်နိုင်သည်။ ထိုနို့တွင် ဗီတာမင်များရုံသာမက ပြည့်ဝဆီနှင့် ကယ်လိုရီပမာဏအတွုက်လဲစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်ကနို့ကိုမကြိုက်ပါက ဒိန်ချသ် သို့မဟုတ် ပဲနို့ကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။
အသားသီးသန့်က အဆီပါသောအသားထက်ပိုကောင်းသည်။ တပါတ်နှစ်ခါ စားသုံးခြင်း သင့်အစားအစာတွင် ပင်လယ်စာထည့်စားခြင်းတို့လုပ်သင့်သည်။
အကြော်များ မွှေကြော်များ ဝက်အူချောင်းများသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း ဆွဲစေသောအရာ အဆီများစွာကိုများစေသည်။ ပြုတ်စားခြင်းသည်လည်း ကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေသည်။
သင်အစားအသောက်ပြင်နေပါက အရသာပိုရှိရန် ချိစ် အသားပြား အဆီ သို့မဟုတ် အသားကိုပိုထည့်ရန်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက သင့်အစာအတွင်း ဆိုဒီယမ်နှင့်အဆီကိုများစေပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထိုအစား အရွက်ကိုသုံးကြည့်သင့်သည်။ ထိုသို့သုံးခြင်းက အစားအသောက်ကိုပိုအရောင်စုံစေပြိး အရသာရှိမည့်ပုံပိုပေါ်စေသည်။
အိမ်မှာစားပါက ကယ်လိုရီပမာဏကိုထိန်းနိုင်သည်။ သို့သော် အပြင်တွင်ထွက်စားပါက ပြုတ်ထားသောအစာထက် ကြော်ထားသော မွေကြော်ထားသောအစာများကိုပိုစားမိတတ်သည်။
သင်အတွက်ကောင်းသော အသီးအရွက်အသစ်ကိုစမ်းစားရန်မတွန့်ပါနှင့်။ တစ်ပါတ်တခါလောက် သင်မစားဘူးသောအသီးအရွက်ကိုစားကြည့်ပါ။
သင်စားလိုသောအရာကိုပန်းသီး အိမ်လုပ်ယို ဒိန်ချဉ် အသီးသုပ် သစ်စေ့များစားခြင်းဖြင့်စိတ်တင်းတိမ်မှုရစေနိုင်သည်။
သင်သတိမထားမိနိုင်သော်လည်း သင်စားသမျှသည် သင့်ကျန်းမာရေး ဓါတ်ပြုမှုအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျန်းမာပြီး ညီမျှသောအစာကိုရွေးချယ်စားပါ။
အချို့သူများက ချက်ချိန်မရသဖြင့် သူတို့စားသောအရာအပေါ်အထင်သေးမိတတ်သည်။ သို့သော် သင်စားသောအရာက သင့်ခန္ဓါကိုယ်နှင့်ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးမှုအတွက်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုကြောင့်သင်ကျန်းမာစေရန် ကျန်းမာစေသောအစာအစာများကိုရွေးချယ်စားရန်အရေးကြီးသည်။
10 Tips: BuildaHealthy Meal. https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-build-healthy-mealAccessed February 17, 2017
10 Tips to BuildaHealthy Meal. http://www.mentorpl.org/10-tips-to-build-a-healthy-meal/Accessed February 17, 2017
10 Tips For Building Healthier Meals. http://timewellspent.empireblue.com/images/healthy-eating-ebcbs/03987NYMENEBSTimeWellSpentBuildAHealthierMealFlier1214.pdfAccessed February 17, 2017